Bheka i-Westbrook Kreon - Ukupheka ngokwakho - i-pvt/ukunethezeka - I-Airbnb
Bheka i-Westbrook Kreon - Ukupheka ngokwakho - i-pvt/ukunethezeka
Westbrook, KwaZulu-Natal, iNingizimu Afrika
Bona i-Flatlet enefenisha ephelele, yangasese futhi ethokomele yokuziphekela enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, etholakala endlini yabanikazi e-Westbrook, idolobhana elithulile egqumeni elimbozwe izindawo ezizungezile eziluhlaza nokubukwa kolwandle okuhlaba umxhwele, amakhilomitha angu-8 kuphela ukusuka esikhumulweni sezindiza se-King Shaka. Iyunithi ingamukela izivakashi ezingu-2 futhi ihlanganisa ikamelo elilodwa elinombhede omkhulu, indlu yokugezela eyi-1 (ishawa), ikhishi elivulekile lohlelo nendawo yokuhlala, i-braai lapa esemaphandleni ne-patio yokusetshenziswa ngasese.
Ikhishi linakho konke okudingekayo.
Iyunithi ihlanzekile ingenabala, iyimfihlo futhi ithokomele. Iphakethe lokuqalisa lesidlo sasekuseni sendlu elinetiye, ikhofi, ushukela, ama-biscuits kanye nesidlo sasekuseni kuyatholakala.
I-DSTV ephelele, i-WiFi engadingiwe nemidlalo yebhodi iyatholakala ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ikhishi linakho konke okudingayo futhi igumbi lokuphumula linendawo yokuphumula ethokomele. Ikhishi/indawo yokuphumula inokufinyelela okuqondile emnyango wesilayidi oya e-braai lapa eseduze. Uvulande ugeleza usuka endaweni ye-lapa. Iyunithi inekhefu elihle lasogwini nokubukwa kolwandle okujulile kusuka ku-lapa, i-patio, ikhishi nendawo yokuphumula. Uma uthanda indawo ethokomele nethokomele kude nesiphithiphithi nempilo yedolobha kodwa futhi usondele ngokwanele ukuvakashela izindawo ezithakazelisayo, izindawo zokudlela namabhishi, ukuchitha isikhathi ngaphandle, ukulalela umsindo wamagagasi, ukugcola kwezinyoni ekuseni futhi ngezikhathi ezithile ubone amahlengethwa, imikhomo nezinkawu ezibucayi, lena yindawo yakho.
I-Westbrook yidolobhana elithulile e-Dolphin Coast elinendawo ezungezile kanye nokubukwa kolwandle. Leli dolobhana lingamakhilomitha angu-9 ukusuka e-King Shaka Int Airport, amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Ballito namakhilomitha angu-34 ukusuka eThekwini. Le ndawo ingamakhilomitha angu-2.1 ukusuka endaweni yokudlela yomndeni edumile yase-Beach Bums ebhishi futhi ingamakhilomitha angu-1 ukusuka e-Spice Restaurant ogwini. Isiteshi segesi esine-Express Spar nokusondela eduze. Izitolo ezinkulu zitholakala e-Ballito. Isitolo esikhulu esiseduze singamakhilomitha angu-7 ukusuka endlini. Le ndlu inokubukwa kolwandle okumangalisayo . Imikhomo namahlengethwa angabonakala ngezikhathi ezithile ngeso elibukhali, izinkawu ezibucayi zivame ukuvakashelwa, umsindo wamagagasi ebusuku kanye nokuduma kwezinyoni ekuseni yilokho okwenza le ndawo ikhange kangaka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Westbrook namaphethelo